मर्जरमा जान लागेका सूर्योदय र त्रिलोकको आकर्षक प्रगति - Aarthiknews
मर्जरमा जान लागेका सूर्योदय र त्रिलोकको आकर्षक प्रगति
काठमाडौं । मर्जरमा जान लागेका सूर्योदय लघुवित्त र त्रिलोक लघुवित्तले आकर्षक प्रगति भएको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सूर्योदय लघुवित्तले दोस्रो त्रैमासमा २ करोड ७९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र त्रिलोक लघुवित्तले १ करोड ५७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हो । गत वर्ष सूर्योदयको नाफा २ करोड २१ लाख ८३ हजार रुपैयाँर त्रिलोकले २७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा त्रिलोकको ४७३ दशमलव ६६ प्रतिशत र सूर्योदयको ७० दशमलव ५७ प्रतिशतले नाफा बृद्धि भएको हो ।
यो वर्ष दुबै कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा गत वर्षभन्दा बढेको छ । सूर्योदयको सञ्चालन मुनाफा गत वर्षभन्दा ७६ दशमलव ८१ प्रतिशत बढी ३ करोड ९२ लाख २१ हजार रुपैयाँ र त्रिलोकको गत वर्षभन्दा करिब ९ गुणा बढी २ करोड ४७ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ । चुक्तापूँजी सूर्योदयको १५ करोड ५९ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने त्रिलोकको ६ करोड ९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । दुबै कम्पनी मर्जरमा गई एकिकृत कारोबार पश्चात चुक्तापूँजी २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नेछ ।
गत वर्षसम्म ५७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको त्रिलोक लघुवित्तको जगेडा कोष रकम यस वर्ष सुधारिएर २ करोड १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । त्रिलोकले गत वर्षभन्दा यस वर्ष साढे ३ गुणा बढी २२ करोड १९ लाख ५ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने २ गुणाभन्दा बढी ८५ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँकर्जा प्रवाह गरेको छ ।
त्यस्तै सूर्योदयको जगेडा कोष रकम ४२ दशमलव ८९ प्रतिशत बढी रू. ९ करोड ३६ लाख ७० हजार कायम भएको छ । यस कम्पनीले गत वर्षभन्दा यस वर्ष ५८ दशमलव ८१ प्रतिशत बढी रू. ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ भने ६५ प्रतिशत बढी रू. १ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख १८ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । सूर्योदयको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक रू. ३५ दशमलव ८४ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १६० दशमलव शून्य ८ रहेको छ । कम्पनीले दोस्रो त्रैमाससम्म १० दशमल शून्य २ प्रतिशत तरलता कायम गरेको छ । सूर्योदय र त्रिलोक लघुवित्त एक आसमा गाभ्ने गाभिने सम्झौता गत असारमा गरेका हुन ।